कक्षा ८ मा पढ्दा-पढ्दै किड्नि फे’ल भएका सन्तोश देउजाको सबैलाइ रु’वा’उने कथा उनकै मुखबाट (हेर्नुस भिडियो) – NepalajaMedia
कक्षा ८ मा पढ्दा-पढ्दै किड्नि फे’ल भएका सन्तोश देउजाको सबैलाइ रु’वा’उने कथा उनकै मुखबाट (हेर्नुस भिडियो)
February 16, 2021 72
आठमा पढ्दा पढ्दै किड्नि फेल भएका सन्तोश देउजाको सबैलाइ रुवाउने कथा उनकै मुखबाट (हेर्नुस भिडियो) अहिले पछिलो समयका एकदमै चर्चीत पत्रकार, युटुबर, तथा समाजसेवी सन्तोश देउजाको जीवन निकै नै अनौठो तथा दुखदायी रहेको छ ।
सानैदेखी निकै नै मेधावी छात्रमा गनिएका सन्तोश कक्षामा सधै प्रथाम हुन्थे । वास्तवमा भन्ने हो भने उनले पढेको सायद घर परिवारका सदस्यले समेत थाहा पाउदैनथे । प्रायागरि सन्तोश घरका सबै सदस्य सुतेको बेला पढ्थे । सानैदेखी चतुर्याइ स्वभावका दिनभरि बाहिर साथीहरुलाइ क्र्याम्बोर्डमा भुल्याउथे अनि आफुचाहि रातभरि पढ्थे ।
सन्तोशका बुबा नेपाल प्रहरिको अवकासप्राप्त ब्यक्ति थिए । नेपाल प्रहरिको अवकाश पस्चात सन्तोशका बुबा छोराछोरीको भविश्यको लागी वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए ।
जब सन्तोश कक्षामा भर्खर मात्र प्रवेश गरेका थिए तव उनको किड्नीमा स्टोन भयो । अर्थात उनको किड्निमा ४२ ओटा स्टोन भयो । त्यसपछि उनकोभअप्रेसन भयो । त्योबेलाको समयमा लगभग उनी छ महिना स्कुल जान पाएनन । जतिबेला उनी अस्पतालको बेडामा अफ्नै जीवनसङ्ग सङघर्स गरिरहेका थिए ।
उनी अस्पतालको बेडमा अनेक कुरा खेलाउदै उनेले अन्त्त आफ्नो मनलाइ आफैले सम्हाले । उनको किड्नि दुइपटक सम्म अ,प्रे,सन गर्नुपर्यो । अतः त्यस दिनदेखि उनी अहिलेसम्म उनी त्यही ड्या’मेज भएको कि’ड्नि लिएर बा’चिरहेका छन ।अब बाकि कथा उनकै मुखबाट सुन्नुहोस ।
Prevभारतीय नायिका अनुष्काले बोकेको यो ब्यागमा मूल्य थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ !
Nextकुकुरले आफ्नो मालिकको मृत्यु हुने थाहा पाएपछि अन्तिम पटक अस्पतालमा पुगेर ‘गुड बाइ’ गरे संगै मालिकको पनि मृत्यु (भिडियो)
गोरखामा जीप दरौदी नदिमा खस्यो: २ शिक्षकको मृत्यु, एउटै विद्यालयका अन्य ७ शिक्षक घाइते
केटू’ आरोहणका गर्ने कीर्तिमानी आरोहीलाई काठमाडौँमा भव्य स्वागत
बिहेपछि महिलाको हि’प बढ्नुको यस्ता छन् १० अनौठा कारण !
प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म यौ’न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ? (14398)